Mateo 13 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Mateo 13 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Da no ara, Yesu fii adi kɔtenaa mpoano. 2 Nnipakuw kɔɔ ne nkyɛn wɔ hɔ. Ɔkɔtenaa ɔkorow bi mu a na nnipakuw no nso gyinagyina mpoano hɔ. 3 Ofitii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn abebu mu se, “Da bi okuafo bi kɔɔ n’afum koguu aba. 4 Ogu so regu no, aba no bi guu ɔkwan mu ma nnomaa bɛsosɔw ne nyinaa. 5 Ebi nso koguu abotan so. Ankyɛ na aba no fifii. 6 Esiane sɛ na dɔte a ɛwɔ abotan no so no sua no nti, owia bɔɔ so no ne nyinaa hyewee. 7 Aba no bi nso guu nsɔe mu. Efifii no, nsɔe no kyekyeree no ma ewui. 8 Nanso aba no bi guu asase pa mu. Enyinii, sow aba mmɔho aduasa; ebi aduosia, ɛnna afoforo nso, ɔha. 9 Nea ɔwɔ aso no, ma ontie!”
NA-TWI : Mateo 13